Shroud လညျး Mixer ကို ပွောငျးပွီ။ – Gaming Noodle
“Shroud လညျး Mixer ကို ပွောငျးပွီ။”
ဂိမျးလောကရဲ့ ထိပျတနျး steamer မြားထဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ Shroud ဟာ အောကျတိုဘာ ၂၄ ရကျနကေ့ Twitch ကို စှနျ့ခှာပွီး Microsoft ရဲ့ Mixer ပျေါကို ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးမီက Ninja ဟာလညျး အလားတူ ပွောငျးရှမှေု့ပွုလုပျခဲ့လို Shroud ဟာ Mixer ပလကျဖောငျးကို ဒုတိယမွောကျပွောငျးရှတေဲ့ နာမညျကွီး streamer ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီလို ပွောငျးရှတေဲ့အကွောငျးကို Shroud ဟာ သူ့ရဲ့ Twitter ပျေါမှာ “Same shroud. New home. mixer.com/shroud” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ Ninja လိုပဲ သူဟာလညျး Mixer ကို ရှေးခယျြလိုကျကွောငျး ဆိုလိုထားဟနျရှိပွီး ဘာကွောငျ့ပွောငျးလဲတယျဆိုတဲ့ အသေးစိတျကိုတော့ ပွောကွားထားခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
Shroud ဟာ ဂိမျးတဈမြိုးထဲကို ကစားပွီး stream လှငျ့သူ မဟုတျပဲ စှယျစုံရလှတဲ့ FPS streamer တဈဦးပါ။ Apex Legends, Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive, Minecraft စတဲ့ဂိမျးမြားကို ဆော့ကစားပွလရှေိ့တဲ့ Shrould ဟာ follower ၆.၅ သနျးကြျော ရရှိထားခဲ့လို့ Twitch ရဲ့ ဒုတိယမွောကျအကွီးဆုံး streamer အဖွဈ ရပျတညျနနေိုငျခဲ့ပါတယျ။
Arsenal.gg ရဲ့ ဖျောပွခကျြမြားအရ Shroud ဟာ ဂိမျးတဈပှဲမှ မကစားပွရသေးခငျမှာတငျ Mixer ပျေါမှာ follower ၂၄,၀၀၀ ကြျော ရရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Call of Duty: Modern Warfare ကို install ပွုလုပျခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ အမွငျ့ဆုံးကွညျ့ရှုသူပေါငျး ၇၈,၀၀၀ ကြျောအထိ မွငျ့တကျခဲ့ပွီး ပြှမျးမြှကွညျ့ရှုသူ ၆၇,၀၀၀ ကြျော ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခကျြအလကျမြားဟာ Shroud နဲ့ Modern Warfare ကို လူအမြားအလှနျစိတျဝငျစားလှကွောငျး သိသာပျေါလှငျစလှေပါတယျ။
ဒီလို အောငျမွငျမှုမြား ရရှိခဲ့လို့လညျး Shroud ဟာ fan မြားနဲ့ Mixer community မြားကို ကြေးဇူးတငျကွောငျးလညျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ Microsoft လို အငျအားကွီးကုမ်ပဏီကွီးမြားရဲ့ အာရုံစိုကျ ကွိုးပမျးနမှေုမြားက ဂိမျးလောကရဲ့ အနာဂတျဟာ ယခုထကျပိုမိုတောကျပလာဦးမှာဖွဈကွောငျး ညှနျပွခကျြမြားပဲ ဖွဈနပေါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြ ရှိပါတယျ။
Source: PCgamer, Dexerto
Article by Combo
“Shroud လည်း Mixer ကို ပြောင်းပြီ။”
ဂိမ်းလောကရဲ့ ထိပ်တန်း steamer များထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Shroud ဟာ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့က Twitch ကို စွန့်ခွာပြီး Microsoft ရဲ့ Mixer ပေါ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက Ninja ဟာလည်း အလားတူ ပြောင်းရွှေ့မှုပြုလုပ်ခဲ့လို Shroud ဟာ ဒုတိယမြောက်ပြောင်းရွှေ့တဲ့ နာမည်ကြီး streamer ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းကို Shroud ဟာ သူ့ရဲ့ Twitter ပေါ်မှာ “Same shoud. New home. mixer.com/shroud” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Ninja လိုပဲ သူဟာလည်း Mixer ကို ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း ဆိုလိုထားဟန်ရှိပြီး ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ ပြောကြားထားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
Shroud ဟာ ဂိမ်းတစ်မျိုးထဲကို ကစားပြီး stream လွှင့်သူ မဟုတ်ပဲ စွယ်စုံရလှတဲ့ FPS streamer တစ်ဦးပါ။ Apex Legends, Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive, Minecraft စတဲ့ဂိမ်းများကို ဆော့ကစားပြလေ့ရှိတဲ့ Shrould ဟာ follower ၆.၅ သန်းကျော် ရရှိထားခဲ့လို့ Twitch ရဲ့ ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံး streamer အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Arsenal.gg ရဲ့ ဖော်ပြချက်များအရ Shroud ဟာ ဂိမ်းတစ်ပွဲမှ မကစားပြရသေးခင်မှာတင် Mixer ပေါ်မှာ follower ၂၄,၀၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Call of Duty: Modern Warfare ကို install ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အမြင့်ဆုံးကြည့်ရှုသူပေါင်း ၇၈,၀၀၀ ကျော်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ပျှမ်းမျှကြည့်ရှုသူ ၆၇,၀၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်များဟာ Shroud နဲ့ Modern Warfare ကို လူအများအလွန်စိတ်ဝင်စားလှကြောင်း သိသာပေါ်လွင်စေလှပါတယ်။
ဒီလို အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့လို့လည်း Shroud ဟာ fan များနဲ့ Mixer community များကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Microsoft လို အင်အားကြီးကုမ္ပဏီကြီးများရဲ့ အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်းနေမှုများက ဂိမ်းလောကရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ယခုထက်ပိုမိုတောက်ပလာဦးမှာဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြချက်များပဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။